Waa maxay sababta Us - Mandarin Chinese Morning School
Afka cad ah iyo qadiimiga ah ee Shiinaha: Mandarin. Dhageysiga wadahadalka a Chinese waa sida haddii erayada aad dhagaysanayso, mar ay kiciyaan oo taxane ah oo animations gaaban oo indhihiinna hortooda ka muuqan. La yaab ma laha, iyadoo ay Han Zi (Chinese Script), jilayaasha kuwaas oo dhan oo ka soo jeeda sawiro, u sheeg sheekooyin of iyaga u gaar ah! Kuwa characters Chinese qaabeeyo afka halka waqti isku mid ah u ogolaanayaan in dabacsanaan weyn, idin siinayo awood u leh inay naftaada si sax ah iyo si xoog leh muujiyaan. Oo layaabna ma leh waxaan ku dhiiri gelinaynaa muhiimadda ay leedahay xirfadaha dhagaysiga ku filan, sida xirfadaha maqalka waa khasab barashada inay ku wada xiriiraan jidka si caadiga ah Chinese.
in-guriga Our loogu talagalay 1-2-3 Learning Cycle si buuxda u aqoonsan tahay iyo kuwo kale asaaska luqada Chinese. Waxaan cawisa luqada si aad u aragto iyo fahmo muhiimka ah waxaa ka mid ah, oo isku mar ah, waxaan kaliya bilaabeyso isticmaalkeeda. Oo ma aha in sida aad baratay afkaaga hooyo, halkaas oo la isticmaalayo iyo fahamka go gacanta ee gacanta?
BARI LA KULMAY WEST
"Macallimow, waa maxay l ogic ee Mandarin ? All kuwa xeerarka aad i siiso, waxay dhigi lahaa wax aan wareejin madaxa! Haddii aad karaa oo keliya ii si ay u sharxaan oo ay macquulka ah, waxaan noqon lahaa si fiican ka hor inta aadan ogaan! "
Haa, Waxaa muuqatay in loo isticmaalo habka waxbaridda, si fudud ma farqiga yaabaa farqiga u dhaxeeya reer galbeedka (non-Chinese) fikirka iyo fikirka Chinese, oo u dhexeeya luqadaha Western iyo Mandarin. Halkii ay ka bixiya fahamka, xeerarka ayaa ku bixiyeen, iyo xeerarka xitaa more.
Si aad u samayso nolosha Mandarin u fududahay ardayda kooxda yimid la habka cusub oo lagu magacaabo Technique Motion gaabis ah . Farsamada Motion gaabis runtii idin tusiyo macquulka ah ee Mandarin, iyo ka sii muhiimsan, idin bara Mandarin kaliya ONE xukunka halkii daraasiin, iyo ardayga aan jeclaan lahaa in?
Waxaa jira waxyaabo aad u rajeeyay aad hore ogaa, sidoo Technique Motion gaabis ah ii waa mid ka mid ah. Waxaan rajeynayaa in aad ka heli doontaa sida wax tar leh sida aan ku sameeyey waqtiga!
Waxaa hadafkayaga si ay u faafiyaan luqadda qurux badan Chinese by bixinta ardayda tayada baridda ugu sareeya, wax kasta oo ay hamiga, asalka ama da'da, iyo meel kasta oo ay yihiin.
Si aad u awoodo in sidaas la sameeyo aannu diiwaan macalimiinta ugu fiican iyo in la horumariyo our fikradda waxbaridda u gaar ah, oo iniino dhala natiijada ka baxsan filasho.
Iyada oo ku saleysan aragtideenna qaababka ugu muhiimsan waa sida soo socota.
Mandarin Morning hab
2 IN 1 iyo 2 PLUS 1 Manhajka
Our Manhajka dhigaysa inaad gaarto goolkii barashada Mandarin, halka waqti isku mid ah aad isku diyaarineysa inay ku aflaxaan imtixaanka Chinese
koorsooyin dheeraad ah loo baahan yahay si ay isugu diyaariyaan imtixaanka
Xariif Learning, isticmaalaya Technique Motion gaabis ah
Our Technique Motion gaabis waxyooday core dhabta ah ee Mandarin, taas oo kordhinaysa xawaaraha waxbarashada gelitaanka
muhimka ah ee Mandarin aan shaaca ka qaaday
FUDUD xafidaadda, isticmaalaya Map-dhismeedka
Waxaan cawisa luqada Chinese galay tiro ka mid ah blocks lagama maarmaan ah dhismaha. Tani waxay u fududahay in la fahmo iyo halkan u fudud in ay u xusuusan
Xafididda kaliya by celceliyay
FUN Isticmaalka, jirsado aad Aqoonta galay Xirfad by siyaabaha kala duwan ee barbarta
Games, music, gabayo, movies, hawlaha EA. samaysan qayb muhiim ah oo ka mid ah hab, ma aha oo kaliya inta lagu guda jiro koorsooyin our, laakiin sidoo kale ka baxsan oo ka dib markii qalin jebinta
Mid ka mid ah jidka dhakhaatiirta isticmaasho oo kaliya buugaagta
Habka baridda Heerarka
Habka baridda Mandarin Morning isticmaala macalimiinta oo dhan si loo sugo tayada baridda
Habka Waxbaridda ku xiran tahay macalimiinta, macalimiinta kala duwan u isticmaalaan hab oo kala duwan
horumar manhajka joogtada ah
Iyada oo ku saleysan ra'yi-celin iyo macalimiinta ardayga 's aragnimo kordhaya aan had iyo goorba wanaajiyo koorsooyinka our isticmaalaya PLAN-DO-SAX-ACT wareegga
No horumar manhajka-dega,
Haddii aad qabto wax su'aalo ah oo ku saabsan dugsiga iyo barnaamijyada our, riix badhanka hoose oo nala soo xiriir!